-Tusmo Ku aadan Amarka Guddoomiyaha ee Washington Caafimaad qabta – Higsiga Soo Kabashada
Si looga jawaabo tirada badan ee kiisaska COVID-19 ee hadda, Gudoomiyaha ayaa abuuray qorshe dib u furid kaasoo oggolaanaaya tirada adeegyada gudaha xarumaha oo kooban. Waxay ugu danbayn u ogolaanaysaa ganacsiyo dheeraadka ah iyo shaqooyinka gudaha xarumaha inay kordhiyaan shaqooyinka ayadoo la yaraynaayo tirada dadka goobta soo galaaya, oo loo yaqaano “xajmiga” sida ku qoran qorshaha dib u furida. Erayga farsamada ayaa ah “booska qofka.” Ka fiiri qorshaha wajiyada loo kala qaybshay halkaan tilmaanta dib u furida gobalkana waxaad ka helaysaa halkaan.
Si aad u hesho tirada dadka la yareeyay ee goobta geli kara ee ku cad qorshaha dib u furida, waa inaad ogaataa tirada dadka caadiga ah ee xaruntaadu qaado iyo tirada ugu badan ee lagu ogol yahay tusmada dib u furida ee Gudoomiyaha.
Helitaanka tirada caadiga ah ee ay qaadi karto (xajmiga) goobtaada:
Booska lasoo dhajiyay. Haddii aad soo dhajisay boorka meelaha dadku kala istaagayaan gudaha ganacsigaaga, u adeegso aasaasiyan markaad cabirayso yaraynta tirada dadka xarunta soo galaaya markiiba. Calaamadaha xadka u dhaxaynaaya dadka ayaa lagusoo dhajinayaa meelaha la iskugu imaado ee ay galayaan dad dhan 50 ama ka badan, ayna ku jiraan maqaayado badan iyo baararka khamriga.
Agabka Ogolaanshaha Dhawaan la baxshay. Haddii aad dhawaan heshay ogolaanshaha wax ka badalka kiraystaha ee xaruntaada, cadadka saxda ah ee dadka soo gali kara xaruntaada ayaa laga heli karaa qorshayaasha ogolaanshaha la ansixiyay. Haddii aad wali haysato koobiga qorshayaasha ogolaanshaha kama danbaysta ah ee dhismaha, arintaan ayay u badan tahay inay noqoto qaabka ugu fudud una boobsiiska badan oo aad ku helayso nambar rasmi ah. Waxaa sidoo kale suurtagal ah inaad awoodo inaad hesho qorshayaasha la ansixiyay adoo galaaya barta Mashruuca eeSeattle Department of Construction & Inspections (SDCI, Waaxda Dhismaha iyo Kormeerka ee Seattle) ama adoo la xariiraaya xirfadlaha naqshada ee ogolaanshaha.
Qiyaasta lagu saleeyay badka iskuweerka. SDCI waxay samaysay cabirada hoose si ay kaaga caawiso qiyaasida tirada dadka caadiyan soo gali karay xaruntaada iyo tirada dadka ee loo ogolyahay inay soo galaan gudaha ama meelaha banaanka sida ku cad qorshaha dib u furida ganacsiga. Inaad adeegsato godadka B iyo C si aad u qiyaasto badka horay u jiray ee xaruntaada ayaa keenaysa tiro ka yar tirada dadka laguu ogol yahay inay xarunta soo galaan laakiin waa dookh kuu furan haddii aadan aqoon tirada dadka caadiyan laguu ogolyahay inay gudaha u galaan goobtaada.
Cabirka: Qiyaasida booskaaga hadda dagsan ee dadku fariisan karaan
Godka A Godka B Godka C
(iyo lifaaqa laga geli karo Tusmada Dib U furida ee Gobolka WA ee Ganacsiyada iyo Shaqaalaha) Aaga la Cabiraayo Marka la Xisaabinaayo Qiyaasta Tirada Caadiga ah ee Dadka soo galaaya Xarunta
(Iskuweer fiid ka uu qofkiiba fariisanaayo)
Maqaayadaha/Baararka khamrada (Wax lagu dhex Cabo) Baraha Cuntada ee Macaamiisha 15
Tafaariikhda (dukaannada) Gudaha aaga Iibka 60
Xarumaha jir dhiska (gudaha) Goobaha jimicsiga 50
Ururada Diinta iyo Cibaadada (gudaha) Goobaha cibaadada 15
Adeegyada Shaqsiga ah Dhammaan xarumaha gudaha 100
Adeegyada Xirfada Dhammaan xarumaha gudaha 100
Qiyaasida booskaaga hadda dagsan ee dadku fariisan karaan:
Ka fiiri badka xajmiga gudaha xarunta ee ku jira Godka B. Waxaad ka heli kartaa wareegga iskuweerka goobtaada heshiiskaaga kirada, qorshayaal kasta oo qaybta ah oo aad haysato, ama Shahaadada kale ee Meeshada aad ku dagan tahay. Haddii aadan go’aamin karin iskuweerka inta fiit (s.f.) ee xaruntaada oo ku qoran wax dukumiinti ah oo aad haysato, waxaad cabiri kartaa (cabirka fiidka) dheerarka iyo balaca meelaha kale ee xaruntaada bad le’eg. Isku dhufo badka aad cabirtay ee dheerarka iyo balaca si aad u hesho iskuweer fiidka xarunta.
U qaybi xajmiga xaruntaada cabiraha caadiga ah ee dadka xarunta soo gali kara (Godka B). Waxaad tirada iskugu rari kartaa godka ugu dhaw ee tirada guud ah.
Tusaalaha: 1,000 iskuweer fiid(92 iskuweer mitir) dabaqa tafaariiqda / 60 iskuweer fiid(5.5 iskuweer mitir) halkii qof = Illaa iyo 17 qof
Si aad u hesho tiradaada dadka la yareeyay ee goobta geli kara ee ku cad qorshaha dib u furida, isku dhufo tirada dadka caadiga ah ee xaruntaadu qaado iyo tirada ugu badan ee lagu ogol yahay tusmada dib u furida ee Gudoomiyaha.
Akhri Qorshaha Gudoomiyaha ee Washington Caafimaad qabta – Higsiga Soo kabashada iyo tusmada dib u furida ee Gudoomiyaha si aad u hesho xajmiyada ganacsigaagu qaadi karo.
Isku dhufo tirada dadka caadiga ah ee xaruntaadu qaado iyo tirada ugu badan ee la ogol yahay.
Tusaalaha: 17 dad ah x 0.25 = Illaa iyo 4 dad ah ayaa la ogol yahay
Su’aalo ma ka qabtaa ka shaqaynta gudaha Seattle? Wac Office of Economic Development (Xafiiska Waaxda Ganacsiga) oo aad ka helayso 206-684-8090. Caawimaada luuqada ee gudaha xarunta ayaa la heli karaa.
Su’aalo ma ka qabtaa xajmiga dadka caadiyan soo gali kara xaruntaada? SDCI ayaa kaa caawin karta inaad raadiso dukumiintiyada hore ee ogolaanshaha, hase yeeshee, diiwaannada ogolaanshaha ayaa qaadanaaya waqti in la raadsho, halka diiwaanada taariikhda, ee duqoobay aan ba la heli karin. SDCI waxay ku talinaysaa in la adeegsado qaababka 1-3 ee kore. Oonleen ahaan ugudir barta: http://web6.seattle.gov/dpd/LUQnA/?Type=2.